Raw Orlistat ntụ ntụ (96829-58-2) hplc≥98% Onye nrụpụta & ụlọ ọrụ
/ ngwaahịa / Ọla abụba / Orlistat ntụ ntụ
SKU: 96829-58-2. Category: Ọla abụba
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Orlistat ntụ ntụ (96829-58-2), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Orlistat ntụ ntụ bụ ihe nchịkọta zuru oke nke lipstatin, onye nwere ike imechi ihe na-eme ka ọrịa lipcrinic ghara ịdị na nje bacteria Streptomyces toxytricini. Orlistat bụ ọgwụ e mere iji na-emeso oke ibu. Otú ọ dị, n'ihi ịdị mfe ya dị mfe, ọ kwụsiri ike, a họọrọ onye na-ede akwụkwọ maka lipstatin maka mmepe dịka ọgwụ ọjọọ.
Orlistat ntụ ntụ video
Orlistat ntụ ntụ isi Characters
Aha aha: Orlistat
Orlistat Okwu Mmalite
Ihe kariri ọkara nke ndị bi n'ụwa esitelarị nyochaa usoro nlekọta ihe dị arọ, dị ka ịnwụ, ịme ahụ, ịwa ahụ, ma ọ bụ ọgwụ. Ihe ngwọta ndị a niile dị irè ma ọ bụrụ na ị na-ekwesị ntụkwasị obi nye ha ma soro ntuziaka ndị ahụ. Otú ọ dị, ịchọrọ ịwa ahụ ma ọ bụ ọgwụ nwere ike ịme ka ọ bụrụ ihe na-emerụ ahụ ma ọ bụrụ na ị naghị eburu ụzọ.
Nhazi nke Orlistat (3-D conformation)
Nhazi nke Orlistat (2-D conformation)
Chemical Njirimara nke Orlistat
Achọpụta Atom Stereocenter agụ 4
Igwe Atom dị egwu 35
Nkịtị ziri 495.392 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 495.392 g / mol
Gburugburu Ebe Gburugburu Ebe Obibi 81.7 A ^ 2
Ọnụ ọgụgụ a pụrụ ịgbanwe agbanwe 23
Igwe Mmuta Acondor Bond Acceptor 5
molekụla arọ 495.745 g / mol
Nkọwa dị mfe nke Orlistat ntụ ntụ
Otu n'ime ọgwụ ndị na-edozi ahụ na ị ga-ahụ n'ọchịchọ gị ịchọta ọgwụ kachasị mma maka ọgwụgwọ bụ Orlistat. Na nyochaa Orlistat a, ị ga-achọta ozi dị mkpa, gụnyere ihe ọ bụ, otu o si arụ ọrụ, na otu esi eji ya mee, ya mere i nwere ike ikpebi ma ọ bụ nhọrọ ziri ezi maka gị.
Gịnị bụ Orlistat?
Orlistat, nke a na-ere dị ka ọgwụ ọgwụ ederede n'okpuru aha ahia Xenical, bụ ọgwụ ọgwụ ọgwụ na-edozi nke a na-eme iji zere nsogbu ndị dị egwu dị ka oke ibu, yana ọnọdụ ndị ọzọ metụtara ibu. Ọ bụ GlaxoSmithKline nyere ya ka ọ bụrụ ọgwụ na-ejide onwe ya na-akpọ Alli na United States na United Kingdom.
Usoro nhazi nke Orlistat dị n'ọtụtụ mba. Kemgbe 2000, e debere ya dịka ọgwụ S3 n'elu ọgwụ na Australia. Nkwenye nke Orlistat dịka ọgwụ na-ejideghị ọgwụ bụ isiokwu na-arụ ụka na United States. Emere ya ugboro ugboro megide nrụpụta ọrụ na nchebe site n'aka ndị na-azụ ahịa ndị a maara dị ka Public Citizen.
Ọrụ Orlistat dịka onye na-agbachi egbugbere ọnụ, nke pụtara na ọ na-egbochi nsị nke abụba na nri, si otú ahụ belata ọnụ ọgụgụ calorie ị na-ewere. Dị nnọọ ka ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ na-egbu, Orlistat a na-eji ya mee ihe na ngbanwe ndị ọzọ dị ndụ dị ka mmega ahụ na nri. Ihe omumu omumu na-egosi na ndi mmadu na-ejide onwe ha na nchikota a na-enwe ohere inweta uzo abuo ma o bu ato karia ndi na-agunyeghi ogwu ahu n'ime ihe ndi ozo.
Otu n'ime akụkụ ndị mara mma banyere Orlistat bụ na ọ bụghị naanị na-enyere gị aka ịkwụsị ibu kama ọ na-emekwa ka ọbara mgbali dị ala. Tụkwasị na nke a, a na-ekwenye na a na-agwọ ọgwụ a dị arọ iji gbochie mmalite nke ọrịa 2 na-arịa ọrịa ndị dị oke njọ n'otu ụzọ ahụ nke mgbanwe ndụ.
Ọ bụ ezie na uru Orlistat dị ọtụtụ ga-enwe obi ụtọ, enwekwara ụfọdụ nsonaazụ ndị Orlistat iji ṅaa ntị. Ihe kachasị emetụta ụbụrụ a na-emekarị bụ steatorrhea. Nke a bụ ọnyá afọ nke ọnyá nke e ji mmanu mmanu, ihe mkpuchi dị ọcha. Ihe mgbaàmà ahụ, nke ọma, ibelata oge.
Orlistat Mechanism nke edinam
Orlistat bụ Intestinal Inthibitinal Inhibitor. Ọgwụ a bụ ihe a na-emegharị anya nke na-emepụta ihe na-egbuke egbuke maka egbugbere ọnụ gastrointestinal lipases. Ọgwụ a na-ejikọta njikọ na syine na-arụ ọrụ na pancreatic na egbugbere ọnụ na-egbu egbu, si otú ahụ na-egbochi ime ihe ha na igbochi abụba site na nri sitere na mmiri na-etinye uche. (NCI04).
N'okwu ndị dị mfe, Orlistat na-eme ka ihe dị njọ site n'ịkwụsị pancreatic na lipstones, bụ ndị dị oké mkpa enzymes na eriri afọ nke na-akụda triglycerides. Mgbe a na-egbochi egbugbere ọnụ ndị a, a na-egbochi hydrolyzation nke triglycerides site na ihe oriri gị n'ime abụba fatty achan.
A na-eji ọnụ na-eri nri ọnụ ma were ya ozugbo; mgbochi mmiri na-emepụta ihe n'ime mpaghara GI. Nanị ọgwụ ole na ole na-etinye n'ime ahụ, na-ewepụ ọtụtụ n'ime ọgwụ ahụ site na feces.
Nnyocha ndị dị ugbu a achọpụtawo Orlistat ka ọ dị ike igbochi enzyme nke metụtara mgbasa nke mkpụrụ ndụ cancer cancer. Ka o sina dị, mmetụta ndị nwere ike ịṅụ ọgwụ (dịka igbochi mkpụrụ ndụ ndị ọzọ a na-emezughị ma ọ bụ bioavailability na-adịghị mma) na-egbochi iji ya dị ka onye na-elekọta antitumor bara uru. N'otu nnyocha, ndị nchọpụta weere usoro nchebe nke ọgwụ na-achọ iji chọta ọgwụ ọhụrụ nke ọgwụ ahụ, tinyere ihe mgbakwunye ya.
N'iji ọgwụ 120 mg 3 mee kwa ụbọchị tupu nri, ma ọ bụ na-edebanye ihe mgbochi arọ na-egbochi njedebe 30 nke abụba na-edozi ahụ ka ọ ghara itinye ya n'ahụ. Inwe otutu onu ozo adighi enye nsogbu di iche iche.
A na-eji Orlistat mee ihe dị ka ọgwụ na-ahụ maka njikwa. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị buru ibu ma ọ bụ ibu ibu. A na-atụ aro mkpụrụ ndụ mgbu dị arọ maka ndị na-enwe nsogbu ahụike metụtara ọrịa. Ọ na-ekwe nkwa inyere ndị mmadụ aka ka ha ghara ịda mbà, ma ọ na-enye aka igbochi ha ịgharaghachi ibu ha furu efu. Site na ime nke a, ọ na-enye aka belata ihe ize ndụ nke ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, ọrịa obi, na ọtụtụ ihe ize ndụ ahụike na-ejikọta oke ibu.
Ọnụ ọgụgụ dị arọ na-efu mgbe ị natara Orlistat dịgasị iche site n'otu onye gaa na nke ọzọ. Ndị na-eme nchọpụta bụ ndị na-agba ọsọ ọnwụnwa nke dị otu afọ chọpụtara na n'agbata 35.5 pasent na 54.8 percent nke isiokwu jisiri ike nweta nsị 5 percent karịa na ozu ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe niile furu efu na abụba abụba. Banyere 16.4% -24.8 nke isiokwu ndị ahụ jisiri ike nweta ma ọ dịkarịa ala, 10 percent abawanye na abụba ahụ. Mgbe ihe ndị a kwụsịrị ịdọrọ Orlistat, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu n'ime ha weghachitere na 35 pasent nke ibu ha jisiri ike hapụ.
Ọdịdị nke Orlistat
Orlistat na-abịa n'ụdị turquoise, capsules siri ike gelatin nke nwere pellets nke ntụ ntụ ma jiri 120-mg. Ngwá usoro a na-atụ aro kwa ụbọchị bụ atọ capsules otu ụbọchị. I kwesịghị iri mkpụrụ ọgwụ atọ ahụ na-aga, kama kama were okpokoro nke ọ bụla nwere abụba, ya bụ, otu maka nri ụtụtụ, otu maka nri ehihie, otu maka nri abalị. Ị nwere ike iburu mkpụrụ ọgwụ ọ bụla na nri ma ọ bụ ruo otu awa mgbe nri. Ọ bụrụ na enwere nri mgbe ụfọdụ, maọbụ ọ bụrụ na nri gị adịghị abụ abụba, a ga-ewepụ ya na Orlistat dose. Achọpụtaghị ihe dị elu karịa usoro a na-atụ aro kwa ụbọchị iji nye uru ọ bụla ọzọ.
Orlistat kachasị dị irè mgbe ejikọtara ya na ụbụrụ ndị ọzọ na-abaghị uru dị ka ịrapagidesi ike na-edozi ahụ, na-edozi obere kalori na mmega ahụ. A dụrụ gị ọdụ ka ọ bụrụ na ị ga-ebute pill na-ebu ibu na nri nke nwere 30 percent calorie si abụba. A na-ahụ mmetụta nke ọgwụ ahụ ozugbo 24-48 awa mgbe o werechara ọgwụ.
A chọpụtawo Orlistat dị irè iji belata ntinye nke ụfọdụ vitamin soluble na beta-carotene. Dị ka ndị dị otú ahụ, a gwara ndị na-eburu ọgwụ ahụ ka ha were ya na vitamin nwere ọtụtụ vitamin nke nwere vitamin abụba na-edozi ahụ iji hụ na nri zuru ezu. A na-atụ aro na a ga-ewebajuju vitamin dịkarịa ala awa abụọ tupu ma ọ bụ mgbe ọ nwụchara.
Maka ndị ọrịa na-anata ọgwụgwọ cyclosporine, a gwara ha ka ha na-enye cyclosporine ma ọ dịkarịa ala 3 awa mgbe ha nesịrị Orlistat. Maka ndị na-anata levothyroxine ọgwụ, a na-agba ha ume inye ọgwụgwọ levothyroxine ma ọ dịkarịa ala 4 awa mgbe ha nụsịrị Orlistat. Ndị na-ewere ma Orlistat na levothyroxine kwesịrị iji nlezianya lelee anya maka mgbanwe nke ọrụ gị.
Tupu mgbe ahụ, a na-ejide akwụkwọ nyocha n'okpuru ọgwụ ndị dọkịta ma ọ bụ onye na-enye ọgwụ. Otú ọ dị, na 2007, US Food and Drug Administration kwadoro ya maka ahịa na-ere ahịa, ya mere, na-eme ka ọ dị maka onye ọ bụla.
Lelee maka mmeghachi omume ọ bụla
Tupu ịṅụ ọgwụ a, ọ ga-adị mma ka gị na dọkịta gị kwurịta ihe ọ bụla ị ga-emeli. Orlistat nwere ihe ndị na-adịghị arụ ọrụ, nke nwere ike ọ gaghị adịrị gị mma, na-eduga ná mmeghachi omume nrịanrịa siri ike na mmetụta ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime ha gụnyere cellulose, microcrystalline, gelatin, silica, na glycolate soda sodium.
Tụlee akụkọ banyere ahụike gị
Ịkwesịrị ịkọrọ onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ dọkịta banyere ọnọdụ ọ bụla ị nwere ike ịnwe. Nke a bụ n'ihi na a na-ekwenyeghị na ndepụta aha na nsogbu na nsogbu, karịsịa ndị jikọtara na mgbaze.
Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na ọnọdụ ọ bụla dị n'okpuru ebe a, ọ ga-adị mma ịchọta ihe ọmụma site na ọkachamara.
Nke a bụ ihe na-adịghị mma nke na-ezighi ezi nri nke nri na usoro GIT. Ị kwesịrị ị rịba ama na nhazi n'onwe ya na-arụ ọrụ site n'imebi mgbaze nke abụba. Ya mere, nke a ga - emesị bụrụ ihe nhụsianya nye onye ọ bụla na - aṅụ ọgwụ ahụ, ma ha na - arịa syndrome malabsorption.
Nsogbu edoji ma obu cholestasis
Nke a bụ ọnọdụ nke na-egbochi mmiri bile na imeju. E nwere ọtụtụ akụkọ nke na - ejikọta ma ọ bụ na - eme ka ọ ghara imerụ ahụ, ọ bụ ezie na ọ na - eme na ihe ndị na - emekarị ma ọ bụ n'okpuru akwa onyonyo.
Nke a gụnyere cholecystectomy na syndromes metụtara.
Ọnọdụ ahụike ndị ọzọ ị ga-agwa onye na-ere ọgwụ na-agụnye nje HIV, ọrịa thyroid, akụrụ akụrụngwa, ọkpụkpụ, ma ọ bụ pancreatitis. N'igbuo ma ọ bụ nkwarụ, orlistat nwere ike ịkwụsị imebi ọgwụ antiepileptic ahụ site na igbochi absorption.
Nsogbu ndị na-eri nri
Ụfọdụ n'ime nsogbu ndị a bụ nkwụsị na nsogbu. Ọzọkwa, ọ dịghị mkpa ka ị ghara ịchọta ma ọ bụrụ na ị bụghị oke.
Ọgwụ ndị ọzọ
Ọ bụ ihe amamihe dị na ịkọrọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nọ na ọgwụ ọ bụla ọzọ kachasị ndị nwere ike imebi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Mkparịta ụka ọgwụ ọjọọ ga-egbochi ọgwụcokinetics, na-eduga ná mmụba ma ọ bụ mgbadawanye na nke ọ bụla n'ime ha. Dịka ọmụmaatụ, orlistat ga-egbochikarị usoro ọgwụ eji eme ihe maka ịkpụ osisi.
Ọ bụrụ na ị nọ na cyclosporine, dọkịta gị ga-agwa gị ka ị zere ma ọ bụ ịchọta. Otú ọ dị, ị ka nwere ike iji ya nye ndụmọdụ. Iji nọrọ n'akụkụ nchebe, ị ga-ewere ya ọ dịkarịa ala awa abụọ tupu ị nweta ọgwụ a ma ọ bụ awa abụọ mgbe e mesịrị.
Tụkwasị na nke a, ịkwesịrị ịkọwa ọgwụ niile na ọgwụ ndị na-abụghị ọgwụ, ọgwụ mgbakwunye, vitamin, anticoagulants, ma ọ bụ mkpụrụ osisi na ị ga-ewere.
Ụmụ nwanyị na-enye nwa ara
Nri ọgwụ nchịkwa a abụghị maka ndị nne na-atụ anya, onye ọ bụla na-ezube ịtụrụ ime, ma ọ bụ na-enye nwa ara. O yikarịghị ka ọgwụ ahụ ọ ga-enwe mmerụ ọ bụla dị njọ, ọ ga-ejikwa mebie nwa ebu n'afọ.
Ọ bụ ezie na ọ dịbeghị anya ma nyocha ọ na-agafe n'obi nne, ị ga-ezere ya ma nwee obi iru ala, karịa mwute.
Ndị na-arịa ọrịa shuga
Orlistat bụ ihe onye ọ bụla nwere ọrịa shuga ga-achọ iji melite ma chịkwaa shuga shuga ma melite ndidi glucose. Ka o sina dị, ị ga na-enyocha shuga shuga mgbe nile ma na-eleta dọkịta ugboro ugboro. Ime nke a na-enyere gị aka ịma mgbe ị ga-edozi ọgwụ shuga, nri nri, na mmemme ahụ iji wepụ.
Orlistat Nkebi emetụta
Dị ka ọtụtụ ọgwụgwọ, orlistat nwere mmetụta dị n'akụkụ ya. A na-ahụkarị mmetụta dị mkpa na isi na àgwà obi. Otú ọ dị, nke a nwere ike ịmepụta naanị n'ime izu ole na ole mbụ ịṅụ ọgwụ ọjọọ.
Nye ụfọdụ ndị, ihe mgbaàmà ahụ nwere ike ịdabere na ndị ọzọ; ọ nwere ike ịga n'ihu na-ewepu onwe gị. N'oge a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgwa dọkịta gị. Ka ị na-adaba na ị na-eri nri na-abụchaghị abụba, ọ ga-adịrị ka ọ ga-abụ mmetụta mmetụta dị iche iche belata.
Lee ụfọdụ mmetụta ndị ọzọ;
Ọ bụ ezie na adịghị njọ, steatorrhea bụ ọnụnọ nke mmanụ na abụba ndị ọzọ na stool. Ebe ọ bụ na a na-emechi egbugbere ọnụ, a gaghị enwe uru nke abụba bara uru. N'ihi ya, ihe ndị ahụ ga-apụta dịka mmanu ma dị egwu.
Iji chịkwaa mmetụta a, onye kwesịrị izere ihe oriri na-aba ụba calorie na ọkwa dị elu. Dị ka ụkpụrụ FDA si kwuo, ọnụego kwesịrị ịdị n'ime 0.53 ounces ma ghara ịgafe 30%.
N'ọtụtụ ọnọdụ, gas na-efesa na mmanụ. Ị ga-enyocha uwe gị ma ọ bụ uwe ị na-achọ maka ịchọta mmanụ.
Ihe na-emeghe, ngwa ngwa, na imegharị obi
Nkwenye na abdominal mgbu
Ụdị oge ọhụụ
Obere shuga shuga
Nke a na-adịkarị n'etiti ndị nwere ụdị ọrịa shuga nke abụọ.
Ọrịa imeju siri ike
Ụdị ndị a dị obere ma ọ ga - erukwa mgbe ị nwere nsogbu imeju na - akpata, ma ọ bụ ị na - ewere usoro dị elu. Na 2010, FDA gụnyere a ịdọ aka ná ntị nchedo na mkpado aha mmadu, nke na egosi ihe ize ndụ nke nwere ike imebi ọnya.
Otú ọ dị, mmetụta a n'akụkụ a ka bụ arụrịta ụka banyere nke ọzọ ikpe ọmụmụ nke e bipụtara na British Medical Journal gosiri na ọ bụghị.
Ụfọdụ n'ime ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị nke ọrịa imeju na-agụnye vomiting, ihe mgbu abdominal, na-acha odo odo, na mmiri mmiri ọkụ.
Mmeghachi omume na-adịghị mma
Ọ dị nnọọ obere ịnata mmetụ ọ bụla ma ọ bụ ihe nfụkasị ọ bụla mgbe ị na-ebute mkpụrụ ndụ na-abaghị uru. Nye ụfọdụ ndị, ihe ndị na-adịghị edozi ahụ dị na ọgwụ ahụ nwere ike ịkpalite ọgbụgbọ, itching, ọkụ ọkụ, ọkpụkpụ ahụ, ike iku ume, ma ọ bụ ịdị nro.
Mmetụta ndị ọzọ na-adịkarịghị na-agụnye nchekasị, isi ọwụwa, bloating, nkasi obi ziri ezi, ike ọgwụgwụ, agụụ na-adịghị ala, na ụyọkọ agba. Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu mgbaàmà, ị ga-agwa dọkịta gị ozugbo ma ọ bụ kọọrọ ya FDA na-ekwu maka mmemme.
Mkpebi ikpeazụ na Orlistat ntụ ntụ
Ọ bụ ezie na listi ọ bụla enwere mmetụta ole na ole, ọ bụ ezigbo ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke ga-eweta nsonaazụ n'ime izu abụọ. Ihe nzuzo nke irite uru na ọgwụ a bụ ịgbaso ntụziaka, nghọta maka nlekọta, na ịlele nri gị.
Ka ị na-achọpụta akwụkwọ, ọ dị mkpa ịgbaso usoro ihe oriri na-edozi ahụ, na-eri obere abụba, calorie dị ala, na mmega ahụ mgbe nile. Nri kwesịrị ekwesị kwesịrị itinye mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, na ọka. Tụkwasị na nke a, ị ga-agbakwunye ihe oriri gị na ngwaahịa dị iche iche dị iche iche dị iche iche na-emepụta ihe na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eri nri nke vitamin.
Mgbe ị na-enwe obi abụọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ dọkịta maka ntụziaka ọzọ. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịkpọtụrụ Nchịkwa nri na ọgwụgwọ US maka nyocha ọ bụla ma ọ bụ kọọ mmetụta ndị na-egbu ndụ, nke a edebeghị.
Olee otú ịzụta Orlistat ntụ ntụ (96829-58-2) site na AASraw
AASraw na-enye 99% Cleanness Orlistat raw powder to bodybuilders or underground labs for use oral use.
Ebumnuche sitere n'aka Orlistat maka ntụpọ ọnwụ-Ihe egwu ọgwụ egwu dị egwu ị ga-ama !!!
Zhi J, Melia AT, Eggers H, Joly R, Patel IH (1995). "Nyochaa njedebe nke usoro nchịkọta nke ndị na-enweghị mmasị, onye na-egbu egbu lipase, na ndị ọrụ afọ ofufo dị mma". J Clin Pharmacol. 35 (11): 1103-8
Garcia SB, Barros LT, Turatti A, et al. A na-ejikọta Orlistat na-aṅụ oké ibu ma ọ bụ na-agbakwụnye na-arịwanye elu na markers preneoplastic na-ejiri ya na anụ kemịl. Ọgwụ cancer. 2006; 240: 221-4.
FDA kwadoro alli (ma ọ bụ ndepụta 60 mg capsules) Over-The-Counter "(PDF) (Ntọhapụ akụkọ). PRNewswire. 7 February 2007
Mittendorfer B, Ostlund RE, Jr, Patterson BW, et al. Orlistat na - egbochi nsị cholesterol nri. Enweghi ike. 2001; 9: 599-604
Peng-Yu, Yang; Kai, Liu; Mun Hong, Ngai; J.Lear, Martin; R.Wenk, Markus; S.Qin, Yao (2010). "Ebumnuche nchebe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke arụmọrụ cellular nke Orlistat-ọgwụ na-akwado FDA na-eme ihe ndị na-egbochi nje ahụ". Akwụkwọ akụkọ nke American Chemical Society. 132 (2): 656-66.